Blogga Olga Steshkina Blogga Olga Steshkina
Ku dar. navigation
Blogga Olga Steshkina
Maxay u xun tahay in la cuno wax kasta oo shiilan? Maxay u xun tahay in la cuno wax kasta oo shiilan? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Maxay u xun tahay in la cuno hilib shiilan? Walaaca ugu wanaagsan ee salka ku haya waa hilibka shiilan. Marka shiilan, oo ay ku jiraan in ka badan dhuxusha, xeryahooda ayaa la sameeyaa, kuwaas oo qiyaaso badan ... Akhri
Maxaad ugu baahan tahay ganache? Maxaad ugu baahan tahay ganache? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Waa maxay sababta loo dejiyo ganache? Haddii ganache -yaasha loo oggol yahay inay xasiliso, markaa ma yeelan doonto qaab -dhismeed siman, laakiin waa mid hadhuudh ah oo ay sabab u tahay firdhinta dufanka oo aan ku filnayn (qaybaha dufanka ayaa aad u ... Akhri
S: Goorma ayay tahay inaad dubto Easter 2022? S: Goorma ayay tahay inaad dubto Easter 2022? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Goorma ayay tahay inaad dubato Easter? Sida dhaqanku qabo, waa caado in la dubayo paschi Arbacada, Khamiista iyo Sabtida. Haddii keega Easter -ka ee la dubay Arbacada ay maareeyaan inay lumiyaan macaankooda fasaxa ... Akhri
Jawaabta ugu fiican: Immisa darajo ayay qaadataa in la shiilo ukunta? Jawaabta ugu fiican: Immisa darajo ayay qaadataa in la shiilo ukunta? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Ilaa intee baad shiilaysaa ukunta? Ku shub ukun digsi kulul (saxanka ku dhaw dusha digsiga). Ukun shiil 1 daqiiqo ka badan kulayl badan. Markaas dabku... Akhri
Miyaan u baahanahay inaan ku daro ukun rooti? Miyaan u baahanahay inaan ku daro ukun rooti? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Waa maxay ukunta ku jirta cajiinka khamiirka? Ukunta ayaa lagu daraa si ay cajiinka ugu kobciso borotiinno iyo fiitamiinno; alaabta la dubay ayaa dhadhan fiican leh oo caafimaad leh. Si aanay buskudka iyo buskuba... Akhri
Su'aashaada: Sidee loo kaydiyaa maraqa balsamic? Su'aashaada: Sidee loo kaydiyaa maraqa balsamic? 2021-10-23 19:01:04	Питание Olga Sologub Sida loo kaydiyo kareemka balsamic? Ku kaydi heerkul u dhexeeya -5C ilaa +30C iyo qoyaanka 75%. Dhalada ku kaydi qaboojiyaha kadib furitaankiisa. Sida loo kaydiyo khalka balsamic... Akhri
Cuntada ugu fiican
Feeraha doofaarka ee la dubay
Salaan, khabiiradayda cuntooyinka qaaliga ah. Miyaad jeceshahay feeraha oo si habboon loo marsaday oo la dubay ama lagu dubay foornada? Waxaan haystaa mid kaliya ... Akhri
Sida loo kariyo feeraha doofaarka la dubay ee marinade teriyaki - talaabo talaabo talaabo talaabo leh sawir 2017-11-13 12:07:25 Cunnooyinka
Cuntada ku jirta roodhida foornada Sida loo kariyo omelet -ka asalka ah ee buskudka foornada ee quraacda - talaabo talaabo talaabo talaabo ah 2017-09-28 11:53:16 Cunnooyinka
Salaan, gourmets -kayga cajiibka ah. Ii sheeg, miyaad jeceshahay cuntooyinka fudud in la sameeyo? Waxaan lahaa jaceylka noocaas ah ee karinta degdegga ah ayaa is muujisay markii wiilkaygu bilaabay inuu socdo. Akhri
Bawdada digaagga oo leh liin iyo liin Sida loo kariyo bowdada digaaga oo leh liin iyo liin foornada - tallaabo tallaabo tallaabo leh oo sawir leh 2017-09-15 12:08:35 Cunnooyinka
Salaan, kuwa jecel wanaagga iyo macmacaanka. Waxaan u malaynayaa inaadan dafiri doonin in shimbiruhu aad ugu wanaagsan yihiin miraha iyo berry. Waa hagaag, tusaale ahaan, saxanka saxeexa ee iid xaflad ... Akhri
Sida loo kariyo ratatouille si habboon Sida loo kariyo ratatouille si sax ah-cuntada caadiga ah ee tallaabo-tallaabo leh sawirro afka laga waraabiyo 2017-09-11 11:57:48 Cunnooyinka
Salaamu calaykum qaali. Dhawaan waxaan daawaday kartoonkii "Ratatouille". Sheeko wanaagsan oo ah wax kasta oo aad rabto ayaa rumoobi kara haddii aadan quusan. Hayso riyo -… Akhri
Digsi baradho leh farmaajo Karinta digsi baradho ah oo macaan oo jiis ah - tallaabo tallaabo tallaabo leh oo sawir leh 2017-09-04 12:01:10 Cunnooyinka
Salaan, khabiiradayda cuntooyinka qaaliga ah. Waxaan ogaaday in qaar badan oo ka mid ah asxaabtaydu ay weheliyaan digsi -ku -duub. Waxaa laga yaabaa sababta oo ah casseroles jiis -jiifku inuu ku dhacay nafta, taas oo ... Akhri
TOP-5 bil gudaheed
Kaabashka la dubay ee digsi
Waffles jiiska ee birta waffle koronto - tallaabo tallaabo cunto karinta oo leh sawir
Maraq Digaag oo Fudud - Culinary Recipe
Kaabashka degdega ah ee la jarjaray
Donuts Cheese - tallaabo fudud oo tallaabo tallaabo ah cunto karinta sawiro
Maxaa lagu kariyaa makiinad wax lagu qaso?
Maanta jikada waxaad ka heli kartaa farabadan qalab waxtar leh.
Cuntada Ducan, marxaladda 2 "Cruise"
Cuntada Dukan 2 marxalad - nuxurka wejiga “beddelka”, ...
Cuntada laga jaray 60 - liiska toddobaadka
Hab aad miisaanka iskaga riddo oo kuu oggolaanaya inaadan gaajoon. Cuntada laga jaray 60 ...
Cunto Dukan - marxalado iyo menus
Waa maxay nuxurka cuntada Dukan, oo ...
Cunto -yaqaannada ceeriin ee caanka ah ee adduunka
Cunto -yaqaannada ugu caansan adduunka oo dhan waxay wadaagaan dareenkooda ku saabsan ...
Ku saabsan nafaqada
Wax badan oo ku saabsan nafaqada
S: Goorma ayay tahay inaad dubto Easter 2022? S: Goorma ayay tahay inaad dubto Easter 2022? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Goorma ayay tahay inaad dubato Easter? Sida dhaqanku qabo, waa caado in la dubayo paschi Arbacada, Khamiista iyo Sabtida. Haddii keega Easter -ka ee la dubay Arbacada ay maareeyaan inay lumiyaan macaankooda fasaxa ... Akhri
Su'aashaada: Sidee loo kaydiyaa maraqa balsamic? Su'aashaada: Sidee loo kaydiyaa maraqa balsamic? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Sida loo kaydiyo kareemka balsamic? Ku kaydi heerkul u dhexeeya -5C ilaa +30C iyo qoyaanka 75%. Dhalada ku kaydi qaboojiyaha kadib furitaankiisa. Sida loo kaydiyo khalka balsamic... Akhri
Maxaad ugu baahan tahay ganache? Maxaad ugu baahan tahay ganache? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Waa maxay sababta loo dejiyo ganache? Haddii ganache -yaasha loo oggol yahay inay xasiliso, markaa ma yeelan doonto qaab -dhismeed siman, laakiin waa mid hadhuudh ah oo ay sabab u tahay firdhinta dufanka oo aan ku filnayn (qaybaha dufanka ayaa aad u ... Akhri
Jawaabta ugu fiican: Immisa darajo ayay qaadataa in la shiilo ukunta? Jawaabta ugu fiican: Immisa darajo ayay qaadataa in la shiilo ukunta? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Ilaa intee baad shiilaysaa ukunta? Ku shub ukun digsi kulul (saxanka ku dhaw dusha digsiga). Ukun shiil 1 daqiiqo ka badan kulayl badan. Markaas dabku... Akhri
Maxay u xun tahay in la cuno wax kasta oo shiilan? Maxay u xun tahay in la cuno wax kasta oo shiilan? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Maxay u xun tahay in la cuno hilib shiilan? Walaaca ugu wanaagsan ee salka ku haya waa hilibka shiilan. Marka shiilan, oo ay ku jiraan in ka badan dhuxusha, xeryahooda ayaa la sameeyaa, kuwaas oo qiyaaso badan ... Akhri
Miyaan u baahanahay inaan ku daro ukun rooti? Miyaan u baahanahay inaan ku daro ukun rooti? 2021-10-23 19:01:04 Питание Olga Sologub Waa maxay ukunta ku jirta cajiinka khamiirka? Ukunta ayaa lagu daraa si ay cajiinka ugu kobciso borotiinno iyo fiitamiinno; alaabta la dubay ayaa dhadhan fiican leh oo caafimaad leh. Si aanay buskudka iyo buskuba... Akhri
Wax badan oo ku saabsan cuntada
Wax kasta oo aad waligaa rabtay inaad ka weydiiso cuntada Maggi Dhammaan waxaad rabtay inaad wax ka weydiiso cuntada Maggi - waxay ka jawaabtaa su'aalaha inta badan la isweydiiyo 2018-10-23 14:30:07 Cuntooyinka Olga Sologub Ururinta su'aalaha ugu badan ee ku saabsan nuugyada Cuntada Maggi. Intee jeer ayaad ku celcelin kartaa, waxa la sameeyo haddii miisaanku istaago, waxa la sameeyo haddii nidaamka lagu xad -gudbo, cabbirka qaybta, waxa la sameeyo haddii calool -istaagga. Khudaarta iyo miraha la oggol yahay, sideed u beddeli kartaa ukunta, kalluunka aad cuni lahayd iyo haddii khamriga iyo khamriga la oggol yahay. Akhri
Waxyaabaha ay wax ku biiriyaan miisaanka luminta Cuntooyin noocee ah ayaa kaa caawin doona dardargelinta dheef -shiid kiimikaadka, gubista dufanka iyo kor u qaadista miisaanka? 2017-12-17 21:18:32 Cuntooyinka Olga Sologub Si miisaanka xad -dhaafka ah uu dhaqso uga baxo, waxaad u baahan tahay inaad cuntid cuntooyinka dardar -galiya dheef -shiid kiimikaadka jirka aadanaha. Waa kuwee kuwa ku caawin doona arrintan? Waxaad ka heli kartaa liiska kuwa ugu fiican maqaalkan. Maraqyada kaloori-yar, firileyda iyo khudaarta ayaa u fiican in miisaanka si dhaqso ah loo dhimo. Dhirta sida udgoonku waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin cuntada - waxay gubaan dufanka waxayna kor u qaadaan miisaanka oo yaraada, gaar ahaan caloosha iyo dhinacyada. Akhri
Miisaanka ku dhimo sinjibiil la shiiday Sida miisaanka si habboon loo dhimo: sinjibiil la shiiday miyuu u fiican yahay miisaanka oo yaraada? 2017-11-01 11:59:14 Cuntooyinka Olga Sologub Ma ka daashay dagaalka miisaanka culus? Iskuday sinjibiil la shiiday si aad miisaanka u dhinto. Maqaalkan, waxaan ku soo uruurinay talooyin waxtar leh oo ku saabsan sida loo qaato sinjibiisha, imisa garaam ayaa jira maalintii, inta la tuuro, haddii si sax ah loo isticmaalo. Iyo sidoo kale cunto karis waxtar u leh sinjibiil pickled guriga, faa'iidooyinka iyo waxyeelada sheyga. Akhri
Waxa aad u baahan tahay inaad cunto si aad miisaankaaga u yaraato Nafaqo habboon iyo jimicsi ayaa fure u ah inaad caato noqoto. Maxaad u baahan tahay inaad cunto si aad miisaankaaga u yaraato? 2017-10-27 11:44:46 Cuntooyinka Olga Sologub Miisaanka xad-dhaafka ah waa dhibaato soo jireen ah oo bulshada casriga ah. Dagaalka ka dhanka ah, jimicsiga iyo tirinta kalooriyada ayaa u soo gurmata. Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa waxaad u baahan tahay inaad cunto si aad miisaankaaga u yaraato, cuntooyinka aad dooranayso, iyo in si aad u hesho natiijooyin wanaagsan waxaad u baahan tahay inaad jimicsi joogto ah samayso, socod badan sameyso, oo si fiican u oroddo. Akhri
Quraacda labaad ee miisaanka oo yaraada "Quraacda labaad" ma tahay hubka qarsoodiga ah ee miisaan lumis? 2017-10-14 11:57:27 Cuntooyinka Olga Sologub Dad badani waxay ku doodaan in quraacda qumman ay fure u tahay maalin guul leh. Si kastaba ha ahaatee, ma aha Waxaa fiican inaad kala badh cuntadaada subax Sidan ayaad ku helaysaa qiimo badan. Akhri
Maxaa khatar ku ah miisaanka soo noqnoqda Waa maxay halista miisaamid soo noqnoqda iyo sida loo helo joogtaynta kaamilka ah 2017-10-12 11:58:59 Cuntooyinka Olga Sologub Dad badan baa daawanaya miisaankooda. Laakiin dadka qaar ayaa aad ugu mashquulsan arrintan. Sidee loo helaa macnaha dahabka ah? Aad bay u sahlan tahay inaad quus ka eegto miisaanka Akhri
Wax badan oo ku saabsan caatada
Jimicsiyada Kegel ee haweenka Sidee si habboon loogu sameeyaa jimicsiyada Kegel dumarka guriga? 2018-04-02 11:56:23 Caato Olga Sologub Jimicsiyada Kegel ee lulaya ama siilka ah waa jimicsi aad u wanaagsan. Maqaalka waxaad ku baran doontaa waxa uu yahay, farsamada sida jimicsiga noocaas ah loogu sameeyo haweenka guriga si sax ah, ma jiraan wax ka hortag ah baabasiirka iyo cystitis -ka, ma suurtogalbaa in la sameeyo xilliga caadada. Iyo sidoo kale casharro tallaabo-tallaabo ah oo casharro loogu talagalay kuwa bilowga ah iyo jimicsiyada kubbadaha. Akhri
Jimicsiyada Kegel ee haweenka uurka leh Sida si habboon loogu sameeyo jimicsiyada Kegel ee haweenka uurka leh miyayna jiraan wax ka hor imanaya? 2018-03-30 11:56:22 Caato Olga Sologub Jimicsiga oo ka kooban jimicsiyada Kegel ayaa faa'iido u leh haweenka uurka leh ilaa 40 toddobaad. Waxaa fiican inaad bilowdo jimicsiga saddexda bilood ee 1aad, laakiin faa'iidooyinka ayaa la ogaan doonaa 2aad iyo 3aad. Maqaalka waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan sida loo sameeyo jimicsiga guriga, dib u eegista iyo ka hortagga. Akhri
Jimicsiga Kegel Ball Jimicsiga dhow ee kubbadaha Kegel: waa maxay iyo sida si sax ah loogu isticmaalo 2018-03-28 12:14:18 Caato Olga Sologub Xoojinta murqaha xubinta taranka dumarka sidoo kale waa suurtogal guriga. Tani waxaad u baahan tahay ukun ama kubbadaha Kegel. Sidee loo adeegsadaa jilitaanka noocaas ah? Aynu ogaano waxa ay yihiin, waxa ay yihiin iyo sida loo sameeyo jimicsiyada. Maqaalkan, waxaad ka heli doontaa tilmaamo ku saabsan sida loo isticmaalo kubbadaha, talooyin ku saabsan sida loo doorto cabbirrada bilowga ah, sida loo geliyo iyo sida ay u shaqeeyaan. Akhri
Jimicsiyada neefsashada 15 daqiiqo maalintii jirka caatada ah - jimicsiyada neefsashada si loo yareeyo caloosha 2018-03-09 11:58:03 Caato Olga Sologub Jimicsiga ugu yaraan 15 daqiiqo maalintii wuxuu kuu horseedi karaa natiijooyin wanaagsan. Waa ku filan in aad si fiican u barato jimicsiyada neefsashada si aad miisaankaaga uga yaraato caloosha. Waa maxay? Maqaalka waxaad ka heli doontaa sharraxaad ku saabsan dabacsanaanta jirka Marina Korpan, jimicsiga Strelnikova, jianfei bilowga iyo fasallada sida waafaqsan nidaamka Japan. Waxa kale oo aad akhrin kartaa dib u eegista oo aad daawan kartaa fiidyow muujinaya tusaalooyinka jimicsiga 8 daqiiqo gudahood. Akhri
Jimicsiyada Slimming Caloosha Ma rabtaa inaad ogaato jimicsiga jirka ee miisaanka kaa luma caloosha, dhinacyada iyo miskaha ayaa ugu waxtarka badan? 2018-03-07 11:58:05 Caato Olga Sologub Jimicsiga waxaa lagu samayn karaa oo kaliya jimicsiga, laakiin sidoo kale guriga, ku fadhiista kursi. Maqaalkan, jimicsiyo wax ku ool ah oo loogu talagalay ragga iyo dumarka ayaa lagu xushay - kubbadda koleyga, kakan neefsashada jirka, baarka guurto ah iyo kuwa kale. Dumbbell wuxuu sameeyaa jimicsi si loo yareeyo caloosha iyo dhinacyada, miskaha, badhida iyo gacmaha. Akhri
Maxaa loogu talagalay mashiinnada Kegel? Waa maxay Tababarayaasha siilka Kegel? Mabda'a hawlgalka iyo tilmaamaha isticmaalka 2018-03-06 11:56:56 Caato Olga Sologub Dumarka, xoojinta muruqyada misigta ayaa suurtogal ah iyada oo la kaashanayo kuwa KJEELE simulators. Waa maxay, sida loo isticmaalo kubbadaha oo ay jiraan wax ka hortag ah - ka akhriso maqaalkan. Sidoo kale dib -u -eegista dhakhaatiirta, sida loo doorto iyo meesha laga iibsado duugistaas, ma suurogalbaa inaad adigu guriga ku samayso iyo sharraxaadda moodooyinka ugu caansan - Master Kegel Master iyo kGoal. Akhri
Wax badan oo ku saabsan quruxda
Waa maxay hordhaca wejiga Horudhaca wajiga: waa maxay iyo sida loo isticmaalo + qiimeynta badeecadaha ugu wanaagsan 2019-01-24 15:59:02 Красота Olga Sologub Galab wanaagsan, akhristayaasha balooga jecel! Ma taqaannaa waxa wejiga lagu saleeyo? Kuwa raacaya talada fannaaniinta xirfadleyda ah ayaa muddo dheer ku daray alaabtan boorsadooda qurxinta. Oo ma ... Akhri
Faa'iidooyinka hyaluronic acid ee wajiga Waa maxay faa'iidooyinka hyaluronic acid ee wajiga: u isticmaal qurxinta iyo guriga 2018-08-29 09:21:57 Красота Olga Sologub Waa maxay hyaluronic acid wajiga? Aynu ogaanno sababta loogu baahan yahay buuxiyeyaasha ku saleysan hyaluronic, sida loo isticmaalo kareemka iyo serum-ka guriga, adeegsiga irbadaha, mesotherapy iyo biorevitalization ee laalaabkii, dibnaha iyo laalaabkii nasolabial ee cosmetology. Waxyaalaha ka hortagga uurka inta lagu jiro uurka oo miyuu suurtogal yahay in la huleelo xagaaga. Faallooyinka habraaca iyo sawirrada kahor iyo kadib. Akhri
Waa maxay daaweynta ozone ee wejiga Waa maxay daaweynta ozone ee wejiga iyo intee ayay ku kacaysaa koorsada daaweynta maqaarka? 2018-08-24 14:21:54 Красота Olga Sologub Saamaynta faa'iidada leh ee ozone ee maqaarka ayaa muddo dheer loo adeegsan jiray qurxinta. Maqaalkan waxaad ku baran doontaa waxa daaweynta ozone u tahay wejiga leh sawir ka hor iyo ka dib, qiimaheeda, sida ay u caawiso daaweynta finanka, finanka, rosacea, iyo oval wajiga iyo qoorta. Waa maxay contraindications, cawaaqibyada iyo dhibaatooyinka. Suuragal ma tahay in lagu isticmaalo guriga iyo inta lagu jiro uurka, intee ayay ku kacaysaa koorsada habraacyadu? Akhri
Naxaasta wejiga iyo jirka Waa maxay naxaasta wejiga iyo jirka loogu talagalay: waxa ay tahay iyo qorshe tallaabo-tallaabo ah oo loo adeegsado 2018-08-20 14:05:12 Красота Olga Sologub Maqaarka dhalaalaya waa riyada gabar walba. Maqaalkan waxaad ku baran doontaa waxa naxaasta u ah wejiga iyo jidhku, waxa loogu talagalay, jaantuska tallaabo-tallaabo ee sawirrada sida loo codsado oo si sax ah loogu adeegsado tilmaame, sida loo doorto badeecad maqaarka fudud , keebaa fiican inaad iibsato - budo ama dareere, dib u eegis ku samee sawirro ka hor iyo ka dib oo ku saabsan summadaha Clarence, Mac, Dior, Letual iyo kuwa kale. Akhri
Waxaa loola jeedaa cidhiidhiga daloolada Dib -u -eegista waxyaalaha la isku qurxiyo ee ugu fiican iyo dawooyinka dadka si loo yareeyo daloolada wejiga 2018-04-01 12:17:03 Красота Olga Sologub Markaad dooranayso dawada ugu fiican ee cidhiidhiga daloolada wajiga, waxaad u baahan tahay inaad ogaato inaad ka iibsan karto diyaarinta dawooyinka ee wax ku oolka ah ama aad ku diyaarin karto maaskaro dad wanaagsan guriga. Waxay noqon kartaa kareem, dhoobada la isku qurxiyo ama maaskaro leh asbiriin, baradho iyo liin, ama malab. Akhri wax dheeraad ah maqaalka, halkaas oo aad sidoo kale ka heli doonto dib u eegisyo iyo qiimayaasha la isku qurxiyo. Akhri
Waa maxay wejiga iftiimiya Waa maxay tusaha wejiga iyo sida loo isticmaalo: barashada sida loo doorto midab oo si sax ah loogu dabaqo 2018-03-31 12:18:51 Красота Olga Sologub Ma heli kartid qurxiyo kaamil ah adiga oo aan muujin. Aynu ogaano waxay tahay iyo sida si sax ah loogu isticmaalo! Maqaalka waxaad ka heli doontaa qorshe tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo dalbado wejiga wareegsan, dib-u-eegista midkee ka fiican in laga iibsado dukaanka internetka, qiimaha iyo qiimeynta tilmaamayaasha wanaagsan, sawirrada ka hor iyo ka dib dalabka, talooyin ku saabsan sida loo doorto hooska la rabo. Akhri
Hi, magacaygu waa Olga. Raadinta cuntooyinka caafimaadka u leh quruxda iyo caafimaadka? Ka dibna ku soo dhawow bloggeyga. Wax badan oo aniga igu saabsan
1983-2020 Blogga Olga Steshkina Nuqulidda maaddada waxaa la dhiirri -geliyaa oo keliya haddii uu jiro xiriir firfircoon takioki.ru
Beddel dejimaha gaarka ah